Music Archives ⋆ Page7of 87 ⋆ Popular
နီနီခင်ဇော်ကို ၂၀၁၉က အလုပ်တွေနဲ့ ကြိုဆိုလို့နေပါတယ်။ နှစ်သစ်မှာ နီနီပထမဆုံးလုပ်ရမယ့်အလုပ်က The Voice Myanmar သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲရဲ့ အကဲဖြတ်ဒိုင်အလုပ်ပါပဲ။ သူမအနေနဲ့ ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လုပ်ခွင့်ရမယ့်အပေါ် . . .
အခွေတစ်​ခွေထွက်​လိုက်​လို့ သီချင်းတစ်​ပုဒ်​၊ နှစ်​ပုဒ်​ပေါက်​သွားတယ်​ဆိုရင်​ပဲ အဆိုတော်​တွေက ကျွမ်းထိုးမတက်​ပျော်​ရွှင်​နေကြတာ။ အကျိုးအမြတ်​တွေကိုလည်း မမျှော်လင့်​ကြပါဘူး။ ပရိ သတ်​အားပေးမှုကိုပဲ လိုချင်​ကြတာပါ...
ပိုက အချစ်သီချင်းတွေဘာတွေ ဆိုလေ့ သိပ်မရှိဘူး။ ကိုယ်ရေးတဲ့ သီချင်းတော် တော်များများက အလွမ်းသီချင်းများတယ် ဆိုတော့လေ။ အချစ် သီချင်းလေး တစ်ပုဒ်လောက်တော့ Valentine's day မှာထွက်မယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ် ပိုင်စတူဒီယိုလည်း အိမ်မှာ ဆောက်မယ်ပေါ့။…
''Ticket Show ကတော့ ရေရှည်မှာလည်း ရှိကိုရှိသင့်တဲ့ဟာ မျိုးဖြစ်နေတာကိုး။ တလောကလည်း ဆရာရွှေဂျော်ဂျော်ရေးတဲ့စာလေး တစ်ခုတောင် သဘောကျလိုက် ပါတယ်။ ခေတ်ကတော့ အမြဲတမ်းကို လည်တာကိုး။ ဆိုတော့ ဘာမှတော့ ပြောလို့မရဘူးထင်တယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် တော့ Ticket…
''ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအချိန်မှာ လက်မှတ်ပွဲတွေက တအားရှားလာပြီ။ လက်မှတ်ပွဲတစ်ပွဲလုပ် မယ်ဆိုရင် Commercial ဖြစ်ပြီးသား၊ နာမည်ရှိပြီးသား လူကတော့ ပွဲလုပ်မယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင် တန်းပြီးတော့ ပြည့်တာပေါ့လေ။ ကျွန်တော်တို့ ဒီဘက်မှာ ကျွန်တော်တို့ပုံစံတွေနဲ့ လုပ်တဲ့ဟာကိုလာပြီးတော့ ကြည့်ဖို့ ဆိုတာကတော့ တော်ရုံတန်ရုံအသစ်…
လူငယ်​ဆန်ဆန်​လေးရေးထားတာဆိုတော့ စာသားတွေကမိုက်တယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့ အဲဒီသီချင်းလေးကို တအားကြိုက်​တယ်​။ နောက်​ပြီး ရင်​ကွဲလမ်းမဆိုတဲ့ မပိုး မီရေးပေးထားတဲ့ သီချင်းလေးလည်းထပ်​ထွက်​ဖို့ရှိတယ်​။ ပရိသတ်​ကြီးကို ဖြေးဖြေးချင်း နဲ့ချပြသွားမှာပါ။ အချိန်​လေးတော့ နည်းနည်းစောင့်​ပေးပါ''လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်​။ ငွေဇင်​တစ်ကိုယ်တော်​အခွေကတော့ . . .
''ဝမ်းနည်းမှတ်​တမ်းမဆိုခင်​က အစ်မ ချစ်​သူသို့ဆိုတဲ့ သီချင်းခွေလေးထွက်တယ်​။ ဒါပေမဲ့ လူတွေ သိပ်​မသိကြဘူး။ အဲဒီအခွေကို စိုင်းစိုင်းက နားထောင်​မိပြီး အစ်​မအသံကို သူက သဘောကျတယ်​။ သူ့အခွေမှာ Featuring သီချင်းတစ်​ပုဒ်​လောက်​ ဆိုပေးပါဆိုပြီး အစ်​မ ကို လာပြောတယ်​။ အစ်​မက...
''အန်တီ က သူ့ကို ဂီတနဲ့ပတ်​သက်​ပြီး အမွေ ထပ်​ပေးချင်​တယ်​။ အရင်​တုန်းကပိုင်​တဲ့ စတူဒီယိုကို အန်​တီမို့မို့ကို အနုပညာအမွေအဖြစ်​ အန်​တီပေးလိုက်​တယ်​။ အန်​တီက အခုအသက်တွေ ကြီးလာတော့ သိပ်​ပြီး မ Run နိုင်​တော့ဘူး။ အန်​တီ့ရဲ့အမွေကို လက်​ခံတာက…
''အခွေက တော့ ထွက်​ဖို့ အစီအစဉ်​ရှိပါတယ်​။ Example အဖွဲ့အနေနဲ့ ဂီတဘက်​ကို လုပ်​ဖြစ်​သွားရင်​တောင်​ တစ်​ခွေ ပဲထပ်​ပြီး ထွက်​ဖြစ်​တော့မှာပါ။ ထွန်း ထွန်းဘက်​ကလည်း အချိန်​ပေးနိုင်​မယ့်​နေ့၊ ကျန်​တဲ့သူတွေကလည်း ကိုယ်​ပိုင်​စီးပွားရေးတွေလုပ်​နေကြ တာဆိုတော့ ဒီသူငယ်​ချင်း ၄ ယောက်​…
''အပူးနဲ့တုန်းက အပူးအရသာပေါ့။ တစ်ယောက်ချင်းကျ တော့ တစ်ယောက်ချင်းအရသာဖြစ်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တချို့သီချင်းတွေဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က...